Cadaado oo fara ba'an uu ku haayo Coronavirus iyo Qeyla dhaan laga soo saaray - Jowhar Somali news Leader
Home News Cadaado oo fara ba’an uu ku haayo Coronavirus iyo Qeyla dhaan laga...
Cadaado oo fara ba’an uu ku haayo Coronavirus iyo Qeyla dhaan laga soo saaray
Magaalada Cadaado ee Gobolka Mudug ayaa saacadihii la soo dhaafay in dad badan u geeriyoodeen Cudurka Coronavirus oo fara ba’an uu ku haayo, iyadoo qeyla dhaan gurmad ah laga soo saaray.
Dad tobaneeyo ka badan ayaa la sheegay inay u dhinteen cudurka Coronavirus, halka kuwa kalena ay la ildaran yihiin, waxaa u dambeysay labo qof oo saaka geeriyooday.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha C/raxmaan Odawaa oo ka soo jeeda Cadaado ayaa ka mid ah siyaasiyiinta soo saaray baaqa qeyl-dhaanta, waxaana uu ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay gurmad degdeg ah la gaarto Cadaado, iyadoo kaashaneysa dowlad goboleedka Galmudug.
“Waxaan halkan Baaq uga dirayaa Dowlad Soomaliya ayadoo kaashanaysa Dowlad Goboleedka Galmudug in si wadajir ah loogu Gurmado Dadka reer Cadaado ee u dhimanaya dayaca Qalab Cafimaad la’aan darteed”ayuu yiri C/raxmaan Odawaa.
Sidoo kale waxaa uu kula taliyay bulshada ku nool Cadaado iyo deegaanada Galmudug inay ka feejignaadaan halista cudurka Coronavirus, isla markaana ay qaataan tallooyinka caafimaad ee looga hortagayo cudurkan.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ka mid ah siyaasiyiinta codkooda ku biiriyay in gurmad loo fidiyo magaalada Cadaado oo uu fara ba’an ku haayo Cudurka Coronavirus.
“Waxaan codkayga ku biirinayaa in gurmad loo fidiyo Magaalada Cadaado ee Dawlad Goboleedka Galmudug oo uu cudurka Karoona Fayris fara ba’an ku hayo dadka deegaanka. Cusbitaalka magaalada ayaan haysanin agabka caafimaad ee cudurka lagula tacaalo. Waxaan ugu baaqayaa Dawlada Federaalka, dawlad Goboleedka iyo shacabka Galmudug in ay gurmad degdeg ah la gaaraan cusbitalka magaalada Cadaado, si loo badbaadiyo dadka uu Fayrusku haleelay”ayuu yiri.
Dad is xilqaamay ayaa saaka cod baahiyeyaal dadka ugu sheegayay in aysan guryahooda ka soo bixin, oo ay ku jiraan, isla markaana la joojiyo goobaha la isugu yimaado, si aanu cudurka ugu faafin.